किन केहि गर्न सक्दैन प्रहरीले नवराज सिलवाललाई ? कारण यस्तो - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
किन केहि गर्न सक्दैन प्रहरीले नवराज सिलवाललाई ? कारण यस्तो
प्रकाशित मिति : आइतवार, फाल्गुन २७, २०७४
काठमाडौं । सरकारी दस्तावेज किर्ते गरेको अभियोग लागेका पूर्वडिआइजी एवम् ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद नवराज सिलवाल संघीय संसद भवनभित्र छिरेका छन् । यसबारे प्रहरीले आफूलाई थाहा नभएको जनाएको छ । प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका सिलवाल संघीय संसद भवन बानेश्वरभित्र देखिएपछि प्रतिक्रिया माग्दा प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।
उनले अाफू बाहिर भएको जनाए । त्यसपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले पनि आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।त्यसो त संसद भवनको प्रवेशद्वारमा चौबीसै घण्टा प्रहरीले सुरक्षा दिन्छ । त्यही प्रवेशद्वारबाट सिलवाल भित्र प्रवेश गरे पनि प्रहरीले कुनै वास्ता गरेन ।
सिलवाल एमाले–माओवादीका सांसदलाई प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्तरूपमा दिने प्रशिक्षणमा सहभागी हुन संसद भवन छिरेका हुन् । सिलवाल एमाले–माओवादी गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनेर ललितपुर १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । संघीय संसदका सदस्यहरूको शपथग्रहण आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
आइतबार शपथ लिन भ्याएको खण्डमा प्रहरीले सभामुखको अनुमतिविना सिलवाललाई पक्रिन पाउने छैन । खासमा कारवाहीमा पर्ने पक्कापक्की भएपछि सिलवालले डिआइजी पदबाट राजीनामा दिएर एमाले प्रवेश गरेका थिए । पछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनकै संरक्षण रहेका सिलवाललाई प्रहरीले छुन नसकेको हो ।